उलिसं निसें मन फर्के जुल… त्यस्तो कुनै नेवाः विवाह नहोला, जसमा यो गीत नबजेको होस् ! जात्रा–पर्वमा पनि अनिवार्य जस्तै। केटाकेटीदेखि बुढापाकासम्मले मन पराएको यो गीतले भन्छ–
मेरो प्यारो मान्छेले मलाई चर्खाको बिँड दिनुभयो, त्यो घटनापछि मेरो मन स्थिर भयो, त्यसपछि मेरो मन परिवर्तन भयो…. गीतका सर्जक ७० वर्षीय रामकृष्ण दुवाल गीतको अर्थ ‘रोमान्टिसिजम’ सँग जोडिएको बताउँछन्। ‘गीतले भनेको एउटा सुनिन्छ, तर सन्देश फरक छ,’ दुवाल भन्छन्, ‘गीतमार्फत् प्रेम विनयसँग गाँसेर कृषि विकासका आधारशिला तयार भएका छन्।’
‘प्रेम विनयसँग सम्बन्धित यो गीतले यौवन आएपछि मान्छेले एकअर्कालाई मनपराउँछन् भन्छ। त्यस्तै बेला बीउ नराखेपछि कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्छ,’ उनले भने। गीतले अनुहार र यौवनले मात्र प्रेम नभई सीप पनि हुनुपर्छ भन्ने संकेत गरेको दुवालको धारणा छ। गीतका बाँकी शब्दले भन्छन् –
उनका अनुसार सरल धून, साधारण राग र नेवारपनका कारण गीत चर्चित छ। कति गीत सुन्न–बुझ्न शब्द र संगीतको ज्ञान हुनुपर्ने भए पनि ुसिरिसाया हेगुु नेपाल भाषा नबुझ्नेले पनि रमाइलो मान्न सक्ने उनी बताउँछन्।
‘सिरिसाया हेगु’ गीत–संगीतका ज्ञाताले भन्दा पनि संगीत मन पराउने मान्छेले सिर्जेको बज्राचार्य अनुमान गर्छन्। जान्नेले कहिलेकाहीँ चाहिनेभन्दा जटिल बनाउन खोज्ने उनको तर्क छ। जति बेला बज्राचार्य संगीतमा लाग्दै थिए, ुसिरिसाया हेगुु का रचनाकार दुवाल संगीतमा सक्रिय थिए।
नेवार समुदायमा नेवार गीत सुन्दै हुर्किए पनि बज्राचार्यले सानामा यो गीत सुनेकै थिएनन् रे। ‘दुवाल दाइले कहाँ–कहाँ खोजेर ल्याउनुभएको हो। यो गीतलाई आफ्नोपन थपेर पुनर्जीवन दिनेमा उहाँकै हात छ,’ उनले भने।